बिएमडब्लु नेपाल भित्रियो, मूल्य कति ? - Arthapage
बिएमडब्लु नेपाल भित्रियो, मूल्य कति ?
प्रकाशित मितिः October 16, 2020 October 16, 2020
गाडीको ब्राण्ड उपभोग र अनरसिप मात्र नभइ प्राप्ति पछिको सेवालाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं। बिएमडब्लुका ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाउने उद्देश्यसहित सर्भिस सेन्टरमा समेत राम्रो लगानीमा तयार पारिरहेका छौं,-संचालक श्रेष्ठले भने।
बिएमडब्लु बिक्रीका लागि कम्पनीले तीनकुनेस्थित सेल्स, सर्भिस, स्पेयर पार्ट्स -थ्री एसु शोरुम तयार गरिसकेको उनले जानकारी दिए। बिएमडब्लु विक्रीका लागि कम्पनीले हाललाई तीनकुनेस्थित आधिकारिक बिक्री केन्द्र मात्र प्रयोग गर्ने उनले बताए। -अहिले हामीले तीनकुनेको शोरुमबाट बिएमडब्लुको बिक्री गर्नेछौं। निकट भविष्यमा ग्राहकको मागलाई मध्यनजर गर्दै आधिकारिक बिक्री केन्द्र विस्तार गर्नेछौं, श्रेष्ठले भने।
कम्पनीले चारवटा सेग्मेन्टका १२ वटा गाडी भित्र्याइसकेको छ। कम्पनीका अनुसार गाडीमा ग्राहकको इच्छा अनुसारको फिचर जडान गर्न मिल्छ। ुइन्टेरियर, एक्स्टेरियर ग्राहकको इच्छा अनुसार समावेश गर्नका लागि हामीले कम्पनीलाई अर्डर दिन्छौं। अर्डर गरेको चारदेखि पाँच महिनामा ग्राहकको इच्छा अनुसारको रङ, डिजाइन लगायत समावेश गरी गाडी उपलब्ध गराउन सकिनेछ, उनले भने।
प्रकाशित मितिः 2:56:50 PM |
Prevपारस खड्काले आफ्नो महिन्द्रा एक्सयूभी ३०० मा गरे सेरामिक कोटिङ
Next१ कात्तिकदेखि लागू हुँदै स्थिर ब्याजदर, कस्को कति ?